UngaluThintela njani usulelo ngeCoronavirus
Inoveli yeCoronavirus 2019, uMbutho wezeMpilo weHlabathi uyiqambe ngokusemthethweni ngokuba yi-2019-NCOV. nge-12 kaJanuwari ka-2020. IiCoronaviruses lusapho olukhulu lweentsholongwane ezaziwayo ukuba zibangela umkhuhlane kunye nezifo ezimandundu ezifana ne-Middle East Respiratory syndrome (MERS) kunye nesifo sokuphefumla esiqatha (SARS). Inoveli ...
Yintoni izinto kunye nokubunjwa kwengubo yokwahlula yonyango?
Ukuqhambuka kwesifo kubangele ukungonelanga kwezixhobo zonyango, kwaye oogqirha basebenzise iingubo zemvula ezinepolypropylene. Ngaba ezi mpahla mthubi, mhlophe, luhlaza, noblowu, kunye nezambatho zokuzikhusela zinemigangatho efanayo? Ngaba iyafana? Apha ngezantsi ndizama ukuxoxa ngale m ...
Ubhubhane weCovid-19: Ziphi iindawo zeendawo ze-coronavirus zehlabathi?
ICoronavirus iyaqhubeka nokusasazeka kwayo kwihlabathi liphela, kunye nezigidi ezingama-31 eziqinisekisiweyo zamatyala kumazwe angama-188 kunye nokufa kwabantu okusondela ngokukhawuleza kwisigidi esinye. Kwiinyanga ezintandathu emva kokuba uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ubhengeze njengobhubhane, intsholongwane iya isanda kumazwe amaninzi nakwamanye ...
ngomphathi ku 20-09-22
Ukuphulukana neCoronavirus 'kwahlukile kubanda nakumkhuhlane'
Ukuphulukana nevumba elinokuhamba ne-coronavirus kwahlukile kwaye kwahlukile kuleyo yehlela umntu onomkhuhlane ombi okanye umkhuhlane, utsho abaphandi baseYurophu abaye bafunda ngamava ezigulana. Xa izigulana ze-Covid-19 zinevumba lokulahleka zihlala ziye ngesiquphe kwaye zibukhali. Kwaye bahlala bengenzi ...